समाचारहरु » संसदीय सुनुवाईमा सभासद्को प्रश्न भावि प्रधानन्यायाधीशको जवाफ
आगामी प्रधानन्यायाधीशको लागि मंगलबारलाई तोकिएको संसदीय सुनुवाई सोमबारै सारियो।
संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले लिने प्रधानन्यायाधीश पदको परीक्षाका लागि पुगेका सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सुरूमै आफ्नो मन्तव्य दिए।
‘न्यायपालिकाको छवि राम्रो छैन भने यसै छोड्न त सकिन्न त्यसलाई उज्यालो बनाउनै पर्छ,’ उनले प्रतिबद्धता जनाए,‘यहाँहरुले लिएको परीक्षामा म पास भएँ भने ८ महिनामा न्यायालयलाई जनताको भरोसा योग्य बनाउन लाग्ने छु,’
न्यायालयमा बसेर सबैको अपिल सुन्नुपर्ने आफूहरुको अपील भने कसैले नसुनेको उनले गुनासो गरेका थिए। त्यो गुनासो हो-न्यायलयलाई बजेट थोरै भयो। उनले न्यायलयलाई प्रशासनिक स्वतन्त्रता दिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे।
त्यसपछि उनलाई सभासद्हरुले प्रश्न गरेका थिए। अधिकांश सभासदले शक्तिपृथकिकरणको बारे प्रश्न गरे। केही समय अघि न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको इजलासबाट १६ बुँदे सम्झौता विरुद्धको आदेशबारे श्रेष्ठले धेरै प्रश्न झेल्नु पर्‍यो।
केही सभासद्का प्रश्न कस्ता थिएः
२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा परेको एउटा रिट न्यायाधीश केदार गिरीले संविधानको धारा १३८ अनुसार खारेज गरे। उनले राजनीतिक विषयवस्तुमा अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने फैसला गरेका थिए। तर अहिले सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले त्यही १६ बुँदे सहमति विरुद्ध आदेश जारी गरे। यसलाई के भन्नु हुन्छ?
मैले सोध्न खोजेका धेरै प्रश्न अरु सभासद्हरुले सोधिसक्नु भएको छ। मलाई यहाँसँग एउटा प्रश्न सोध्ने मन छ। अदालतमा राजनीतिक र अन्य भागभण्डाका आधारमा न्यायाधीश सिफारीस हुन्छन् भन्ने गरिन्छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारीस भएर त यहाँ सुनुवाईको लागि पनि आउँछन्।
एकवर्ष अघि आठ न्यायाधीशहरु यहाँ आए। उनीहरुको सिफारीसकै चर्को विरोध भयो। यो समितिमै पनि कसैलाई चित्त बुझेको थिएन। तर सबै पास पनि भएर गए। अब तपाईँलाई के लाग्छ? यो सुनुवाईको औचित्य छ कि छैन?
आरजु देउवा राणा
यहाँलाई केही कार्यक्रमहरुमा सुन्ने मौका पाएको थिएँ। राम्रो लाग्यो यहाँ पनि हामीले सुन्न पाइयो। मेरो प्रश्न- जुडिसियल एक्टीभिजमको दायरा के हो?
अदालतमा भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेल धेरै हुन्छ भन्ने छताछुल्ल भैसक्यो। तर कसैलाई कारबाही भएको थाहा छैन। यहाँको कार्यकालमा आर्थिक चलखेल गर्ने दुईचार जनालाई कारबाही गरेर देखाइदिनुस्। अनि अर्को कुरा न्यायाधीशको सम्पत्ति पहिले कति थियो र अहिले कति भन्ने विवरणपनि हेर्न नपाइने रहेछ त्यो सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो।
कानुनी भ्रष्टाचारले देश जर्जर भैसकेको छ। विशिष्ट र मर्यादित पद हो कि व्यक्ति हो? त्यो प्रष्ट पारिदिनुस्। अनि सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुले सेटिङ मिलाउँछन् भन्ने छ।सेटिङ मिलाएरै नियुक्ति पनि गर्छन रे। न्यायाधीश भैसकेपछि पार्टीको दैलोमा पुगेर धन्यवाद टक्राउने न्यायाधीश पनि छन्। न्यायालय यस्तो छ अर्कोतिर मुद्दा लडेर जिन्दगीभर दुःख पाउनुभन्दा अन्याय सहनु जाति भन्छन् जनता। तपाई यो अवस्था हटाउन के गर्नु हुन्छ?
पूर्वयूवराज्ञीलाई राजपरिवारको सम्पत्ति दिने गरि फैसला गर्ने सर्वोच्चले भोलि ‘श्री ५को सरकार’ गठन गर भन्ने आदेश नदेला त?
अदालतले हामीले बनाएको कानुनको व्याख्या गर्ने हो। त्यो कानुनकै अधिनमा रहेर व्याख्या गर्नुहोला।
न्यायाधीश श्रेष्ठको जवाफ
यतिबेर मैले मेरो नियत,क्षमता र हैसियतमा समेत प्रश्नहरु गर्नुभयो। मैले सुनेँ। अब म स्पष्ट वक्ता भएर केही बोल्न चाहन्छु दिनुहुन्छ भने।
आफ्नो इतिहासको निर्मम परीक्षामा छु तपाईहरुले जे परिणाम दिनुहुन्छ त्यो बेहोर्न म तयार छु।
अचेल कताकता के लाग्छ भने तपाईहरु जस्तो स्वतन्त्र विचरण गर्न मैले पाइन।
अदालतभित्र तपाईँहरुजस्तो स्वतन्त्र हुन पाईँदैन त्यसका केही दायरा र मर्यादा छन्। म तीनै मर्यादा पालन गर्दै आएँ।
अहिले यहाँ तपाईँहरुका प्रश्न देखेर मलाई हामीले कस्तो देश निर्माण गरौँला भन्ने लागिरहेको छ।
संविधानको मान्नेले संविधानवाद मान्नैपर्छ। यहाँहरुले नै लेखेको संविधानअनुसार हामी चलिरहेका छौँ। आफ्नै गोडाले लागेर त लड्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकहिले हामी त फरक संस्थाहरु हौ। दृष्टीकोणको फरक भैरहन्छ। तर त्यही कारण हामी द्वन्दमा फस्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। द्वन्दको खेती गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन।
संविधानले तोके अनुसार न्यायपालिका,कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नै आफ्नै काम गर्ने हो। न्यायलयको काम न्याय गर्ने हो। जतिसुकै रिस उठे पनि तपाईँले यसलाई मान्नै पर्नेहुन्छ।
जति रिस उठेपनि विरामी भए तपाई अस्पताल नै जानुपर्छ। त्यस्तै न्यायका लागि तपाई अदालत नगई हुन्न। अदालतले दुधको दुध र पानीको पानी छुट्टाउन तपाईँहरुले नै बनाएका कानुन हेर्ने हो। त्यसैले तपाईँले गतिलो कानुन बनाउनुस्।
मैले यहाँ देखिरहेको छु तपाईँहरुले मलाई प्रश्न गर्दा अदालतमा विचाराधीन विषयमा पनि गरिरहनुभएको छ। सुनुवाईको मौका छोपेर यहाँहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ मैले दिँए भने म नैतिकरुपमा च्यूत हुने छु।
न्याय गर्ने निकाय न्यायलय नै हो। त्यसैले न्यायलयको नियतमाथि शंका नगर्नुस्। न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको छ भने कारबाही गर्नुहोस्। अमुक व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्दै गीत गाउँदै नहिँडिदिनु होला त्यसले न्यायलयको मर्यादामा प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। बरु खोज्नुस् कसले कहाँ भ्रष्टाचार गरेको छ। कारबाही गर्ने अधिकार यहाँहरुलाई पनि छ। हामी पनि हाम्रो तर्फबाट खोजी गर्छौँ।
तपाईँहरुले आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्ति विषेशको, न्यायाधीशको तर हाम्रो संस्थाकै नियतमा प्रश्न उठ्ने गरि शंका नगरिदिनुहोला।
आज मलाई लागिरहेको छ एकले अर्कोलाई यति धेरै अविश्वास यति धेरै शंका गरेपछि हामीले राष्ट्र कसरी जोगाउन सकौँला?
अदालतलाई न्यायाशील बनाउने कानुन निर्माण गर्ने तपाईहरुकै काम हो। मलाई लाग्छ हाम्रो मुलुकमा जुनखालको कानुनी राज्य छ त्यो काम चलाउ खालको छ। बलियो कानुनी राज्य नबनाउने हो न्यायपालिका चाहिँदैन विघटन गरिदिनुस्। म त सधैँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छु। यहाँहरुले त कानुनमात्रै होइन संविधानपनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले कस्तो न्यायपालिका बनाउन खोज्नुभएको हो त्यस्तै लेख्दीनुस। हामी त संविधानमा जे छ त्यही अनुसार चल्ने हो।
यहाँ एकजनाले भन्नु भयो कानुनका नौ सिङ हुन्छन्,नेपालको कानुन दैवले जानुन्, यस्तो किन भयो?
यो कानुन त तपाईँहरुले बनाएको हो। यो प्रश्नको जवाफ त तपाईँहरुले नै हो दिने।
म आफ्नो करियरका बेला धेरै जसो तराईमै बसेँ। तर मलाई उजुरी पर्दा तराई मधेसी विरोधी भनेर पर्‍यो। खै उहाँहरुले के देख्नुभयो त्यस्तो। मैले तराईमा हजारौँ मुद्दा छिने होला कसैले यस्तो सवाल गरेको थाहा छैन। मैले पहाडीयालाई छुट्टै र मधेसीलाई छुट्टै फैसला गरेको छैन। मलाई यहाँ आएर यस्तो सुन्नुपर्दा गहिरो पीडा भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई त तपाईँहरुले नै कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। गम्भीर आरोप छन् भने मेरो पक्षमा हैन मेरा आरोपमाथि न्याय गरिदिनुस्।
न्यायाधीश नियुक्ति सबभन्दा ठूलो समस्या भएको छ। परिषद्को अहिलेको संरचनाले गर्दा पनि समस्या हो।
बजेट थोरै, पुराना कानुन बनाउने र पुरानै पूर्वाधारमा अदालत चलिरहेको छ।
यहाँ कसैले सेटिङको कुरा उठाउनु भयो। यो के भनेको मलाई थाहा छैन।अनुभवै छैन कसरी यो मिलाउने।
तपाईँहरूले न्यायलयको नियतमा शंका नगर्नुस् त्यस्तो फेला परे यहाँसँग महाअभियोगको संयन्त्र छ।
आजै मैले कतै पढेको थिएँ,देउतालाई पूजा गर्ने हो भने आफूमा पनि देवभाव हुनुपर्छ राक्षसभाव हुनेले देउताको पूजा कसरी गर्न सक्छ र?
न्यायपनि त्यस्तै हो। न्याय खोज्ने मान्छेमा पनि न्यायको भाव चाहिन्छ। त्यसैले हामी सबैले न्यायको भाव जगाउँ।
धेरै भावुक भएँ बोल्दाबोल्दै। मेरा कुरा यति नै हुन्। यहाँहरुलाई शुभकामना संविधान निर्माणको घडीमा हुनुहुन्छ,राम्रो संविधान लेख्नुहोला।
स्रोत: नागरिकन्युजडटकम,प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ १४, २०७२